Ny mpiara-manorina ny Global Voices no hitarika ny Ivotoerana ho amin’ny Media Sivika ao amin’ny MIT · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2011 19:57 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, 繁體中文, 简体中文, Español, Aymara, Português, English
Ethan Zuckerman. Sary Joi Ito (CC-BY-2.0)
Mpiara-manorina ny Global Voices sady sakaiza hatry ny ela ao amin'ny Anjerimanontolon'i Harvard ao amin'ny Berkman Center for Internet and Society [Ivotoerana Berkman ho amin'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina], notendrena ho Talen'ny Ivotoerana ho amin'ny Media Sivika ao amin'ny MIT i Ethan Zuckerman ary mpikaroka voalohany ao amin'ny Media Lab an'i MIT. Handray ny asany izy amin'ny 1 Septambra 2011. Efa niarahaba an'i Ethan tamin'ny fifandraisana anatiny izahay ato amin'ny Global Voices ary manantena avokoa fa hahita fianarana sy handray anjara hampandrosoana ny fikarohana!
Ny Ivotoeram-pikarohana (fantatra taloha amin'ny hoe Ivotoerana ho amin'ny Hoavin'ny Media Sivika) dia najoro tamin'ny 2007 niaraka tamin'ny fanohanan'ny Fondation John S. and James L. Knight mba hamakafaka ny lalam-baovao sy ny fanambin'ny vaovao sy ny fahalalam-baovao ao anatin'ny vanim-potoanana nomerika. Tamin'ny Alarobia ny Fondation Knight no nanambara ny fampiasam-bola fanampiny mahatratra $3.76 tapitrisa ho an'ny Ivotoerana hanitarana ny asany sy ny fikarohany.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Andrew Phelps nivoaka tamin'ny Alarobia Maraina tao amin'ny Nieman Lab avy any Harvard no nanazavan'i Ethan fa hihoatra noho ny fijerena ny fitaovam-pampitam-baovaon'olotsotra no hifantohan'ny Ivotoerana mba hanadihadiana ny fomba fifandraisana malalaka kokoa sy ny fomba handraisan-dry zareo fanapahan-kevitra mba haha-“olom-pirenena mpandray andraikitra” azy.
Mety ho izay rehetra momba ny fanetsiketsehana ny Media Sivika. Mety ho izay rehetra miresaka momba ny fanangonana antontan-kevitra ho an'ny Fiarahamonina. Karazana fanaovan-gazety io ary mihoatra noho izany. Fahefana malalaka dia malalaka io. Midadasika tahaka ny fanontaniana amin'izay fomba hanapahan'ny Fiarahamonina mifototra amin'ny fahazoam-baovao? Ao anatin'izany saha izay tsy mampino izany ny hadadasiny, dia misy faritra roa tiako hifantohana manokana.
Ny ankamaroan'ny asako tao anatin'ny roa taona izay dia ny fiezahana hihaino izay tsy heno loatra, ny olona voahilikilika. Noho izany azonao vakiana avy amin'izay fijery izay ny tetikasa Global Voices. Fiezahana tsy hoe hanome anjara fitenenana ny olona any an-dalampandrosoana ihany, fa mba hanome vintana tsaratsara kokoa azy ireny ho heno. Ary izany no lohahevitra tena natrehina sy nifantohan'ny asa sasany nataon'ny Ivotoerana ho amin'ny Hoavin'ny Media Sivika [Center for Future Civic Media].
Ao amin'ny bilaoginy manokana i Ethan no niteny ny fientanentanany satria hifantoka amin'ny fanakambanana tetikasa teorika sy pratika ny Ivotoerana.
Miorina eo anelanelan'ny Media Lab an'i MIT sy ny departemantan'ny Fampianarana Fampitam-baovao atao Fampitaha ny Ivotoerana, izay mametraka fanamby mahaliana eo anoloan'ny mpikaroka: Samy miasa hamorona fitaovana vaovao sy hanatsara ny fomba fieritreritra sy ny teoria ambadiky ny sahan'ny fampitam-baovao sivika ny roa tonta.
Ao amin'ny GigaOM i Matthew Ingram no mitsamboatra amin'ny fandrenesana ny vaovao nanendrena an'i Ethan, tamin'ny fanontaniana raha hanampy ny famoronana indray ny fampitam-baovao ao an-toerana ny MIT, noho ny tolona fiavotan-tena ataon'ny fampitam-baovao anatin'ny vaim-potoanan'ny nomerika izao. Ny fanendrena an'i Ethan dia nanaraka indrindra ny nandraisan'i Joichi Ito ny maha-tale Media Lab azy ao amin'ny MIT tamin'ny volana Avrily. Joi Ito dia mpandraharaha an'aterieto manana ny fanintonan-keriny sady filoha sady Filohan'ny Tale Jeneralin'ny Creative Commons. Joi ihany koa dia anisan'ny filankevim-pitantanan'ny Global Voices.